Japana: Manana Ny Antom-pisiany Ireny Filaharana Tsy Misy Fiafarany Ireny · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 09 Aogositra 2017 5:01 GMT
Vakio amin'ny teny Deutsch, Français, bahasa Indonesia, English
Na io resaka lasopy paty ramen matsiro iray lovia, maodely vaovao anà kilalao an-tsarimihetsika, mofomamy anà tambajotra malaza fivarotana zavamamy avy any ivelany na boky farany avy amin'ny mpanoratra tantara be mpividy indrindra, vonona ny hilahatra foana ireo vahoaka Japoney sasany! Mandritra ny ora maro raha ilaina, eo anoloan'ny fivarotana mba hahazo izay tiany, na amin'ny andron'ny hatsiaka manorana be amin'ny ririnina io na andro midaniky ny hafanana 40°C amin'ny fahavaratra.
Indrindra ireo fisokafana vaovao, tena maka fanahy. Rehefa misokatra ny fivarotana vaovao, sahala amin'ny hoe manokatra vata feno zava-tsarobidy, izay ireo tonga voalohany no afaka maka ny zavatra tena tiany mialohan'ireo hafa ary amin'ny vidiny tena mirary sy manokana.
Filaharana eo anoloan'ny fivarotana takoyaki. Avy tamin'i idua_japan, mpampiasa Flickr
Milaza ny fomba nampidirany ny zanany vavy amin'io fahazarana io i Kuropurin, efa nilahatra maherin'ny adiny 4 ora mba hahazo ny bisikiletan'ny nofiny.
Tiako mba hahatsapa fifikirana amin'ilay bisikileta ho azony ny zanako vavy, noho izany, nentiko tany amin'ny fivarotana izy ary nataoko nilahatra niaraka tamiko teo.
Nisokatra tamin'ny 10 ilay fivarotana ary nankany amin'ilay fivarotana aho ny omalin'io mba hahafantarana hoe amin'ny firy izahay no tokony ho tonga. Henoko fa amin'ny 6 maraina no manomboka miforona ny filaharam-be, noho izany, nanapa-kevitra ny hifoha amin'ny 6 izahay ny ampitson'iny.
Vao tonga ilay andro, nifoha tamin'ny 6 izaho sy ny zanako vavy, niakanjo ary tonga dia lasa. Teny an-dàlana mankany amin'ilay fivarotana bisikileta, nividy sakafo maraina izahay ary tonga haingana tany amin'izay naleha, 5 minitra amin'ny fiarakodia teo avy ao an-trano. Raha vao tonga izahay, efa nisy olona nisinisy ihany nilahatra, fa bisikileta 10 no amidy, 5 amin'ireo amin'ny lokony tadiaviny. Toa tonga aloha ihany izahay mba hahazo ilay iray tiany.
Ary niandry teo izahay avy eo, tsy fantatro tsara hoe adiny firy
. Nisy fotoana, nanomboka nizara tapakila nisy laharana izy ireo, kanefa tsy nanan-jo niverina teo amin'ny filaharanay intsony izahay raha vao niala ny filaharana, hany ka tsy maintsy nijanona izahay. “Inona no dikan'ilay fananana tapakila misy laharana?” Niteny izany aho mba ho hahenoan'ilay mpanampy ao amin'ny fivarotana ahy.
Nialohan'ny nivoahan'ny fivarotana, efa nanoratra ireo antontan-taratasy rehetra ho an'ny takelaka fametrahana laharana izahay, ary taorian'ny tamin'ny 10 maraina, vao tonga ny anjaranay, tonga izahay dia nandoa. Azonay ihany nony farany ny bisikiletanay!
Tsy misy olona tia milahatra izany, fa iray amin'ireo zavatra “tsy afaka ialàna!” io, izay ny bainga voavadika no porofon'ny asa.
Milahatra anaty orana i Guru guru mba hahazo tapakila hijerena fampisehoana ataon'ny Takarazuka [en], tropinà teatira an-kira malaza be izay vehivavy daholo ny mpikambana ao.
Na halako aza ny milahatra, nataoko izany.
Latsaky ny 10°C ny maripàna any ivelany, sady manorana, kanefa niandry nandritra ny adiny 1 sy 20 minitra aho.
Fantatro mialoha fa hisy tapakila 42 azo alaina ao anatin'ny iray andro. Izany hoe efa hitako [ilay fampisehoana] roa andro lasa izay fa… mbola niafara tamin'ny filaharana indray aho!!!
Filaharana lava be manoloana ny teatira hatsikana Suehirotei. Avy tamin'i K.Suzuki, mpampiasa Flickr
Lazaina [ja] ho tena ahazoana tombony be ny filaharana ao amin'ny toeram-pilalaovana pachinko [en]. Manome fahafahana anao hisafidy ny milina izay heverinao ho mety hanome anao fandresena amin'io andro io ny fahatongavana voalohany. Fanampin'izay, raha vao misy toeram-pilalaovana vaovao pachinko misokatra, somary mbola migoragora ireo ‘chukkers’ ary mbola ‘tsaratsara’ kokoa ny fanomanana ireo milina.
Kanefa, ahoana ny fihetsehampon'ireo mpitazona fivarotana mahita ireo filaharana miforona?
Milaza ny tompona fivarotana mofomamy fa tena faly izy raha nahita ireo ankizy nilahatra hividy ny mofomaminy.
Talohan'ny nanokafako ny fivarotana, nahatsikaritra ankizy 3 amin'ny ambaratonga voalohany nivory teo anoloan'ny fivarotana aho.
Nanapa-kevitra ny tsy hiraharaha azy ireo aho ary nanohy ny fiomanako. Fony vita ireo fiomanana henoko nisy niteny hoe “60 amin'ireo azafady”.
“Inona?….Oh, azafady. Hay miandry ahy ianareo? Tena faly tokoa aho!” […]
Tonga mba hividy ireo ‘mofomamy keliko’ fotsiny izy ireo.
Fantatra matetika ho kahihitra aho fa tamin'ity nomeko kadoa kely izy ireo. “Noho izany, mijanona ho mpividy maharitra ato amin'ity lehilahy antitra ity mandra-pahafatiny!” Mihanihany aho!